Adoration - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > fanompoam-pivavahana
Ny fanompoam-pivavahana dia valin-kafatra noforonin’Andriamanitra ho an’ny voninahitr’Andriamanitra. Entanin’ny fitiavan’Andriamanitra izany ary avy amin’ny fanambaran’Andriamanitra ny tenany amin’ny zavaboariny. Ao amin’ny fanompoam-pivavahana dia miditra amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra Ray ny mino amin’ny alalan’i Jesoa Kristy izay mpanelanelana amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny fanompoam-pivavahana koa dia midika fa manetry tena sy amim-pifaliana no ataontsika loha laharana amin’ny zava-drehetra Andriamanitra. Aseho amin’ny fihetsika sy fihetsika toy ny: vavaka, fiderana, fankalazana, fahalalahan-tanana, famindram-po mavitrika, fibebahana. (Johanes 4,23; 1. Johannes 4,19; Filipianina 2,5- enina ambin'ny folo; 1. Petrus 2,9-10; Efesianina 5,18-20; Kolosiana 3,16-17; Romana 5,8-11; 12,1; Hebreo 12,28; 13,15-16)
Valio amin'ny fanompoana Andriamanitra
Mamaly an'Andriamanitra am-panompoana isika satria ny fiankohofana fotsiny dia omen'Andriamanitra izay mendrika ho azy. Mendrika ny hoderantsika manokana.
Andriamanitra dia fitiavana ary izay rehetra nataony dia ataony amin'ny fitiavana. Mamirapiratra izany. Izahay dia mirehareha fitiavana amin'ny olona iray, sa tsy izany? Midera ny olona manolotra ny fiainany hanampy ny hafa isika. Tsy nanana hery ampy hamonjy ny fiainany manokana izy ireo, fa nampiasa ny hery ananany mba hanampiana ny hafa - izay mendri-piderana izany. Ny mifanohitra amin'izany kosa, dia mitsikera ny olona nanana fahefana izahay nefa nandà tsy hanampy. Tsara kokoa noho ny fahefana ny hatsaram-panahy, ary tsara sy mahery Andriamanitra.
Ny fiderana dia manalalaka ny fatoram-pitiavana eo amintsika sy Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy mba mihena, fa ny fitiavantsika azy matetika no mandà. Ho fiderana antsika dia tsaroantsika ny fitiavanay antsika ary nandrehitra ny afon'ny fitiavana azy isika izay nasian'ny Fanahy Masina tao amintsika. Tsara ny mitadidy sy mampihatra ny fomba tena mahafinaritra Andriamanitra, satria mampatanjaka antsika ao amin'i Kristy izany ary mampitombo ny antony manosika antsika hitovy Aminy amin'ny hatsarany, izay mampitombo ny fifaliantsika.
Natao ho fiderana an'Andriamanitra isika (1. Petrus 2,9) mba hitondrany voninahitra sy haja ho azy, ary arakaraka ny hifanaraka amin’Andriamanitra no hitomboan’ny fifaliantsika. Mahafa-po kokoa ny fiainana rehefa manao izay nahariana antsika isika: manome voninahitra an’Andriamanitra. Tsy amin’ny fanompoam-pivavahana ihany no anaovantsika izany, fa eo amin’ny fomba fiainantsika koa.
Fomba fiaina ny fivavahana. Atolotsika ho an’Andriamanitra ny vatantsika sy ny saintsika ho sorona2,1-2). Manompo an’Andriamanitra isika rehefa mizara ny filazantsara amin’ny hafa5,16). Manompo an’Andriamanitra isika rehefa manao sorona ara-bola (Filipiana 4,18). Manompo an’Andriamanitra isika rehefa manampy olona3,16). Asehontsika fa mendrika izy, mendrika ny fotoanantsika, ny fiheverantsika ary ny tsy fivadihantsika. Mankalaza ny voninahiny sy ny fanetren-tenany isika amin’ny fahatongavantsika ho anisan’ny tenantsika. Midera ny fahamarinany sy ny fahasoavany isika. Midera azy isika noho ny toetrany.
Izany no antony namoronany antsika - hanambara ny voninahiny. Mety fotsiny ny midera an'Ilay nanao antsika, izay maty sy nitsangana indray hamonjy antsika sy hanome antsika fiainana mandrakizay, ilay mbola miasa hanampy antsika, mba hitovy bebe kokoa. Izahay dia tsy maintsy mankatò azy sy manolo-tena.
Natao hidera an’Andriamanitra isika, ary hanao izany mandrakizay. Nomena fahitana ny amin’ny hoavy i Jaona: “Ary ny zava-boary rehetra izay any an-danitra sy etỳ an-tany sy ambanin’ny tany sy izay any an-dranomasina mbamin’izay rehetra ao aminy dia reko nanao hoe: Ho an’izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy ho Azy anie ny Zanak’ondry. fiderana sy haja sy fiderana ary herisetra mandrakizay mandrakizay! (Epifania 5,13). Izao no valiny marina: hajaina ho an’izay hajaina, haja ho an’ny manan-kaja, tsy fivadihana ho an’izay azo itokisana.
Fitsipika dimy momba ny fanompoana
Ao amin’ny Salamo 33,1-3 Izao no vakintsika: Mifalia amin’i Jehovah, ry olo-marina; aoka ny mahitsy hidera Azy. Miderà an'i Jehovah amin'ny lokanga; mankalazà Azy amin'ny valiha tory folo. Mihirà fihiram-baovao ho Azy; milalao tsara amin'ny tady miaraka amin'ny feo falifaly!" Ny Soratra Masina dia mamporisika antsika hihira fihiram-baovao ho an’i Jehovah, hihoby amin’ny fifaliana, hampiasa lokanga, sodina, ampongatapaka, trompetra ary kipantsona - na dia ny fivavahana amin’ny dihy aza ( Salamo 149-150 ). Ny sary dia iray amin'ny firavoravoana, ny fifaliana tsy misy fetra, ny fahasambarana izay aseho tsy misy sakana.
Manome ohatra momba ny fanompoana amin'ny fotoana fohy ny Baiboly. Izy io dia manome antsika ohatra momba ny fomba fanao amin'ny fomba ofisialy, miaraka amin'ny fanaovan-javatra stereotypika izay nijanona ho toy ny taonjato maro. Samy azo hamarinina ny endri-pivavahana roa, ary tsy afaka ny hitaky ny hany fomba tokana hidera an'Andriamanitra. Te-hamerina hamerina ireo fitsipika ankapobeny mifandraika amin'ny fanompoana aho.
Voalohany indrindra, tian’Andriamanitra hivavahana aminy isika. Izany dia tsy tapaka izay hitantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny Soratra Masina (1. Mosesy 4,4; John 4,23; Apokalypsy 22,9). Ny fanompoam-pivavahana dia iray amin’ireo antony niantsoana antsika: hanambara ny asany be voninahitra (1. Petrus 2,9). Tsy vitan’ny hoe tia sy mankatò Azy ny vahoakan’Andriamanitra, fa manao fanompoam-pivavahana manokana koa. Manao sorona izy ireo, mihira fiderana, mivavaka.
Mahita karazana fanompoam-pivavahana isan-karazany isika ao amin’ny Soratra Masina. Tsipiriany maro no voalaza ao amin’ny lalàn’i Mosesy. Nisy olona nomena asa sasany tamin'ny fotoana sasany tany amin'ny toerana sasany. Ny hoe iza, inona, oviana, aiza ary ahoana no nomena tamin'ny antsipiriany. Mifanohitra amin'izany kosa no hitantsika ao amin'ny 1. Vitsy dia vitsy ny bokin’i Mosesy momba ny fomba nivavahan’ny patriarka. Tsy nanana fisoronana voatendry izy ireo, tsy voafetra ho amin’ny toerana iray manokana, ary nomena tari-dalana kely momba ny zavatra tokony hatao sorona sy ny fotoana tokony hatao sorona.
Indray ao amin'ny Testamenta Vaovao isika dia mahita kely momba ny fomba sy ny fotoana hivavahana. Tsy natao tamin'ny vondron'olona na toerana iray manokana ihany ny asa fanompoana. Kristy dia nanafoana ny fepetra takian'ny Mosesy sy ny fetra. Ny mpino rehetra dia mpisorona ary manolotra ny tenany ho sorona velona.
2. Andriamanitra ihany no tokony hivavahana
Na dia eo aza ny karazana karazam-pivavahana isan-karazany, ny iray tsy miova amin'ny alàlan'ny soratra rehetra: Andriamanitra irery no tokony ivavahana. Ny fanompoana dia tsy maintsy miavaka raha toa ka ekena. Andriamanitra dia mitaky ny fitiavantsika rehetra, ny fahatokiantsika rehetra. Tsy afaka manompo andriamanitra roa isika. Na dia mety hivavaka aminy amin'ny fomba samihafa aza isika, ny firaisan-tsaintsika dia miorina amin'ny hoe Izy no ivavahantsika.
Tany amin'ny Isiraely taloha, dia andriamanitra lehibe ilay andriamanitra mpifaninana. Tamin'ny andron'i Jesosy dia fomban-drazana, ny fahamarinana ary ny fihatsarambelatsihy. Marina fa izay rehetra mampisaraka antsika sy Andriamanitra - izay rehetra mahatonga antsika tsy mankatò azy - dia andriamanitra sandoka, sampy. Ho an'ny olona sasany dia vola izy io. Ho an'ny hafa dia firaisana ara-nofo. Ny sasany dia manana olana lehibe kokoa amin'ny fireharehana na manahy momba izay mety ho ny fiheveran'ny olon-kafa azy ireo. Jaona nanonona andriamanitra sandoka iraisana sasany rehefa nanoratra izy hoe:
«Aza tia izao tontolo izao na izay eo amin’izao tontolo izao. Raha misy tia izao tontolo izao, dia tsy misy fitiavana ny Ray ao anatiny. Fa izay rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny fiavonavonana, dia tsy avy amin'ny Ray, fa avy amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izao tontolo izao miaraka amin'ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay.”1. Johannes 2,15- iray).
Na inona na inona fahalementsika, tsy maintsy manomboana azy isika, mamono azy dia mila manala ireo andriamani-diso rehetra isika. Raha misy manakana antsika tsy hankatò an'Andriamanitra dia tokony hesorina isika. Tian'Andriamanitra hivavaka irery ny olona.
Ny fanamafisana fahatelo momba ny fanompoana izay hitantsika ao amin'ny Soratra Masina dia ny fiankohofana tsy maintsy tso-po. Tsy misy ilana azy ny manao zavatra ho an'ny endrika, mihira ireo hira mety, mivory amin'ny andro mety, milaza ny teny mety raha tsy tena tia an Andriamanitra ao am-pontsika isika. Nokianin'i Jesosy ireo izay nanaja an'Andriamanitra tamin'ny molony nefa nanompo sampy azy satria zava-poana ny fon'izy ireo. Ny fomban-drazan'izy ireo (natao hanehoana ny fitiavany sy ny fiankohofany) dia nanjary sakana tamin'ny tena fitiavana sy fanompoana.
Nohamafisin’i Jesosy koa fa ilaina ny fahamarinana rehefa nilaza izy fa tsy maintsy mivavaka aminy amin’ny fanahy sy ny fahamarinana isika (Jao 4,24). Rehefa milaza isika fa tia an’Andriamanitra nefa tena tezitra amin’ny torolalany dia mpihatsaravelatsihy isika. Raha sarobidy amintsika noho ny fahefany ny fahafahantsika, dia tsy afaka manompo azy marina isika. Tsy mahazo mandray ny fanekeny eo am-bavantsika sy manipy ny teniny ao ivohontsika isika ( Salamo 50,16:17 ). Tsy afaka miantso azy hoe Tompo isika ka tsy miraharaha izay lazainy.
Mandritra ny Soratra Masina, mahita fa ny fivavahana marina dia tsy maintsy misy mankatò. Io fankatoavana io dia tsy maintsy ahitantsika ny tenin'Andriamanitra momba ny fifampitondrantsika.
Tsy afaka manome voninahitra an’Andriamanitra isika raha tsy manome voninahitra ny zanany. « Raha misy manao hoe: Tiako Andriamanitra, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy. Fa iza no tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitia an’Andriamanitra izay tsy hitany? (1. Johannes 4,20-21). Mampahatsiahy ahy ny fanakianana tsy misy indrafo nataon'i Isaia momba ireo izay manao fombafombam-pivavahana nefa manao ny tsy rariny ara-tsosialy:
“Inona no tiana holazaina amin'ny hamaroan'ny niharam-boinao? hoy ny Tompo. Feno ondrilahy sorona dorana sy saboran’ny zanak’omby mifahy aho, ary tsy sitrako ny ran’ny vantotr’ombilahy sy ny zanak’ondry ary ny osilahy. Raha tonga hiseho eo anatrehako ianao, iza no hangataka anao hanitsaka ny kianjako? Aza manao fanatitra hohanina foana toy izany intsony; Halako emboka manitra! Ny voaloham-bolana sy ny sabata, raha miangona ianareo, dia tsy tiako ny fanaratsiana sy ny fivoriam-be! Mankahala ny voaloham-bolanareo sy ny fetinareo isan-taona ny fanahiko; enta-mavesatra amiko ireny ka sasatra ny mitondra azy aho. Ary na manatsotra ny tananareo aza ianareo, dia hafeniko aminareo ny masoko; ary na dia mivavaka be aza ianareo, dia tsy henoiko; fa feno rà ny tananareo» (Isaia 1,11-15).
Raha ny fahalalantsika azy fotsiny dia tsy nisy nimenomenona momba ny andro nitrangan'ireto olona ireto, ny karazana emboka manitra na ny biby nataon'izy ireo. Ny olana dia ny fomba niainan'izy ireo nandritra ny fotoana sisa. "Rakotra ra ny tananao", hoy izy - ary mbola azoko antoka fa tsy tamin'ny olona tena namono olona ihany no olana.
Niantso vahaolana feno izy: "Avelao ny ratsy, mianara hanao ny tsara, katsaho ny fahamarinana, ampio ny ampahorina, omeo rariny ny kamboty, tantano ny adin'ny mpitondratena!" (And 16-17). Tsy maintsy nametraka ny fifandraisan'izy ireo manokana izy ireo. Tsy maintsy nesorin'izy ireo ny fitsarana an-tendrony, ny fomba fijery diso momba ny saranga ara-tsosialy ary ny fomba ara-toekarena tsy ara-drariny.
5. Ny fiainana manontolo
Ny fanompoam-pivavahana, raha misy ny tena izy, dia tsy maintsy manova ny fomba itondrantsika azy fito andro isan-kerinandro. Fitsipika iray hafa hitantsika ao amin'ny Soratra Masina izany.
Ahoana no tokony hivavahantsika? Micha dia mametraka izany fanontaniana izany ary manome antsika ny valiny:
“Hataoko ahoana no hanatona an’i Jehovah, hiankohoka eo anatrehan’Andriamanitra Avo Indrindra? Tokony hanatona azy ve aho hitondra fanatitra dorana sy zanak'omby iray taona? Moa ho sitrak'i Jehovah va ny ondrilahy arivoarivo sy ny ony diloilo tsy hita isa? Hanolotra ny lahimatoa va aho noho ny fahadisoako, ny ateraky ny kiboko noho ny fahotako? Ralehilahy, efa nambara taminao izay tsara sy izay angatahin’ny Tompo aminao, dia ny hitandremanao ny tenin’Andriamanitra sy ny fitiavana ary ny fanetren-tena eo anatrehan’Andriamanitrao » (Mi. 6,6- iray).
Nohamafisin’i Hosea koa fa zava-dehibe kokoa noho ny fomba fanompoam-pivavahana ny fifandraisan’ny olombelona. "Satria fitiavana no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà, dia ny fahalalana an'Andriamanitra, fa tsy ny fanatitra dorana." Tsy ny fiderana ihany no niantsoana antsika, fa ny asa tsara koa (Efesiana 2,10).
Ny foto-pinoantsika momba ny fiankohofana dia tsy maintsy mihoatra lavitra noho ny mozika sy ny andro maro. Ireo antsipiriany ireo dia tsy dia manan-danja amin'ny fomba fiainantsika. Ny fihatsarambelatsihy dia ny mitandrina ny Sabata rehefa mamafy fisarahana eo amin'ny mpirahalahy. Tsy fihatsarambelatsihy ny mihira ny salamo fotsiny ary tsy mivavaka amin'ny fomba mamaritra ny azy izy. Ny fihatsarambelatsihy dia reharehany ny fankalazana ny Fahatongavana ho nofo izay manome ohatra momba ny fanetrentena. Mihatsaravelatsihy ny miantso an'i Jesosy Tompo raha tsy mitady ny fahamarinany sy ny famindram-pony isika.
Ny fanompoam-pivavahana dia mihoatra noho ny hetsika ivelany fotsiny - tafiditra amin'ny fiovana tanteraka amin'ny fitondran-tenantsika vokatry ny fiovana tanteraka ao am-po, fiovana nentin'ny Fanahy Masina ao amintsika. Mba hanatanterahana izany fanovana izany dia mila ny fahavononantsika mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny vavaka, ny fandalinana, ary ny fika ara-panahy hafa. Ity fanovana ity dia tsy mitranga amin'ny alàlan'ny teny majika na rano majika - izany dia amin'ny alàlan'ny mandany fotoana amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra.
Ny fomba fijerin'i Paoly momba ny fanompoana
Ny fanompoam-pivavahana dia mandrakotra ny fiainantsika rehetra. Hitantsika indrindra ao amin’ny tenin’i Paoly izany. Ny teny hoe sorona sy fanompoam-pivavahana no nampiasain’i Paoly toy izao manaraka izao: “Ary ankehitriny, ry rahalahy malala, mananatra anareo aho noho ny famindrampon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, ​​masina, sitrak’Andriamanitra. Aoka izany ho fanompoam-pivavahana araka ny antonony » (Romana 12,1). Ny fiainana manontolo dia tokony ho fanompoam-pivavahana, fa tsy adiny vitsivitsy isan-kerinandro. Mazava ho azy fa raha manokan-tena amin’ny fanompoam-pivavahana ny fiainantsika, dia azo antoka fa hisy ora vitsivitsy hiarahana amin’ny Kristianina hafa isan-kerinandro!
Mampiasa teny hafa ilazana ny sorona sy fanompoam-pivavahana i Paoly ao amin’ny Romana 15,16Raha niresaka ny amin’ny fahasoavana nomen’Andriamanitra azy izy, dia “mba ho mpanompon’i Kristy Jesosy any amin’ny jentilisa aho, hitantana ny filazantsaran’Andriamanitra amin’ny maha-mpisorona, mba ho fanatitra sitrak’Andriamanitra, nohamasinin’ny Masina, ny jentilisa. Fanahy." Hitantsika eto fa endrika fanompoam-pivavahana ny fitoriana ny filazantsara.
Koa satria pretra isika rehetra, dia samy manana ny andraikitry ny pretra ny manambara ny soa ho an’ireo izay niantso antsika (1. Petrus 2,9) - fanompoana izay azon’ny mpikambana rehetra atrehina, na fara faharatsiny, mandray anjara amin’ny fanampiana ny hafa hitory ny filazantsara.
Rehefa nisaotra ny Filipiana i Paoly noho ny nandefasany fanampiana ara-bola, dia nampiasa izao teny izao ho an’ny fanompoam-pivavahana izy: “Izaho noraisiko tamin’i Epafrodito izay avy taminareo, dia hanitra ankasitrahana, fanatitra mahafinaritra, sitrak’Andriamanitra.” (Filipianina) 4,18).
Ny fanampiana ara-bola izay omentsika ny Kristiana hafa dia mety ho endrika fanompoana. Ny Hebreo 13 dia mamaritra ny fiankohofana izay atao amin'ny teny sy amin'ny asany: "Koa amin'izany dia andeha isika hidera an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny alalany, dia ny vokatry ny molotra izay milaza ny anarany. Aza adino ny manao soa ary mizara izany amin'ny hafa; fa sorona toy izany no sitrak'Andriamanitra ”(and. 15-16).
Raha takatsika ny fanompoana dia fomba fiaina izay misy ny fankatoavana sy ny vavaka isan'andro ary ny fandalinana, dia heveriko fa manana fomba fijery tsara kokoa isika rehefa mijery ny fanontaniana momba ny mozika sy andro. Na dia ny mozika aza dia ampahany lehibe amin'ny fanompoam-pivavahana, farafaharatsiny hatramin'ny andron'i David, ny mozika dia tsy ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fanompoana.
Tahaka izany koa, na dia ny Testamenta Taloha aza dia mahatsapa fa tsy dia manan-danja loatra ny andro ivavahana amin'ny fomba hitondrantsika ny manaraka. Ny fanekena vaovao dia tsy mitaky andro iray manokana hivavahana, fa mitaky asa azo ampiharina momba ny fitiavana. Takian'izy ny hiangona isika, saingy tsy didiny izy rehefa miangona.
Ry namako, nantsoina isika hivavaka, hankalaza ary hanome voninahitra an Andriamanitra. Fifaliana ho antsika ny manambara ny soa azony, ny mizara ny vaovao tsara tamin'ny zavatra nataony ho antsika ao amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy.